Jonatan Nilsson na-emepụta ihe eji eme ugogbe iji mepụta ite amorphous. dezeen-logo dezeen-logo dezeen-logo
Eyi gbazee fụọ akwa ákwà Ndinam igwe
Onye mmebe ihe Sweden bụ Jonatan Nilsson ji mpempe akwụkwọ na ihe okike ya rụọ igwe nke aka ya iji mepụta usoro nke iko edo, nke nwere ọnụ ya na ihu ya.
Mgbe Nielsen enweghị ike ịchọta iko zuru oke na-afụ ebu, Nielsen chịkọtara igwe nke aka ya iji mee ite ime ọ bụla na usoro Shifting Shape.
Onye mmebe ihe eji eme ihe na Stockholm jiri blọk gbapuo ihe ndị ahụ na blọk osisi, ma kekọta ha ụzọ abụọ n'ụdị dị iche iche wee dezie ha n'ụdị mpempe akwụkwọ n'akụkụ abụọ.
Enwere ike idozi osisi dị iche iche na efere ọla iji nye mmetụta dị iche iche, n'ihi na ụdị osisi nwere ike inye ọdịdị ikpeazụ nke ite ahụ.
Ọnụ ụzọ nke igwe ahụ na-agagharị na mgbatị, na-enye onye ọrụ ohere ịdọrọ ọdịdị osisi ahụ na azụ. Ozugbo emechiri ọnụ ụzọ ahụ, a na-ejikọ ihe mgbochi osisi ọnụ, ma oghere dị n'etiti etiti ọ bụla.
Ọ bụ ọdịiche a na-etinye ihe mgbochi iko dị ọkụ ma kpochapụ ya. Onye mmebe ahụ mepụtara ngwaahịa ikpeazụ yana ndị na-afụ iko.
Fọdụ ndị nwere oghere, akụkụ ọnụ ha, ebe ndị ọzọ ejirila ma ọ bụ fegharịa akụkụ. Ihu na azụ azụ nke ọ bụla n’ime ha dị larịị ma nwee ọdịdị rọrọ arọ. Ọ dabara na, ọ dị ka akara osisi osisi sitere n'okike.
Onye mmebe ahụ kọwara na mmetụta a bụ nsonaazụ nke iko na-afụ na ihu igwe oyi.
Nielsen kọwara, sị: “Dị ka ọ na-adịbu, a pụrụ iji ihe e ji kụchie osisi ahụ mee ihe karịrị otu narị ugboro, ọ na-enwekarị otu ụdị.” Achọrọ m ịnye usoro nke nwere ike ịgbanwe ọdịdị ahụ ọsọ ọsọ, ma mechaa chọọ igwe a.
“Enwere m mmasị n’ụdị pụrụ iche nke enwere ike ịnweta site na iko a kpụrụ akpụ, na achọrọ m ịmepụta ụzọ ga-enyere gị aka ịnweta ihe ọhụụ n’emeghị oge na-eri oge na oke ọnụ nke ịme ihe ọhụụ. Dị. ” O kwukwara.
Nielsen chọkwara iji ọrụ ahụ gosipụta etu esi arụpụta ọrụ nwere ike imetụta nsonaazụ nke ngwaahịa ndị emechara.
Onye mmebe ahụ kwuru, sị: “O siri ike ikwu ihe ga-emecha kụchaa ite ụgbọ mmiri ahụ site n'ịchọpụta ihe ndị ahụ e ji osisi rụọ.”
Ọ gara n'ihu, sị: "Ọ masịrị m na e nwere ụfọdụ ihe ọghọm dị na nhazi oge a n'ihi na ọ nwere ike ime ka ọdịdị ahụ dị na iko a mechara."
Otu ite ahụ na-enweta agba ya na-enwu gbaa site na ogwe ndị nwere agba iko, nke a na-eme ka ha dị ọkụ na oven dị iche iche wee jikọta ya na iko ọcha n'oge usoro ịfụ.
Dị nnọọ ka ọdịdị nke ite ọ bụla dị n'ụdị na-enweghị atụ na nke pụrụ iche, otu ahụkwa ka njikọta agba, ụfọdụ n'ime ha na-acha odo odo miri emi jikọtara na-acha odo odo, ebe ndị ọzọ nwere ngwakọta agwakọta aghụghọ nke ụda sitere na oroma ruo pink.
Nielsen nwere izu abụọ ibi n'ụlọ ọrụ na-emepụta ugo na Småland, Sweden, wee kpokọta ihe dị ka ọrụ iri abụọ. Ogologo nke arịa ọ bụla dị n'etiti 25 na 40 cm.
Akụkọ ndị yiri ya Efere nke igwe mmiri na-atacha mmiri na-agwakọta nkenke ọrụaka na nkọwapụta ejiri aka mee
Studio Joachim-Morineau na Eindhoven rụpụtakwara igwe nrụpụta nke ya, nke nwere ike ịmepụtaghachi njehie mmadụ iji mee ọpụrụiche pụrụ iche.
Ngwaọrụ ahụ na-agba mmiri mmiri mmiri na-eme ka ọ bụrụ iko na ọkwá dị iche iche na ụdị dị iche iche. Ọ Aims ikpokọta oru nkenke na "burrs" ike yiri ma ọ bụghị yiri ihe.
Dezeen kwa izu bụ akwụkwọ akụkọ ahọpụtara nke a na-ezigara na Tọzdee ọ bụla, nke nwere isi ihe Dezeen. Ndị debanyere aha kwa izu Dezeen ga-enwetakwa mmelite oge ụfọdụ na ihe omume, asọmpi na akụkọ na-agbasa.
Anyị ga-eji adresị email gị zitere gị akwụkwọ ozi ị rịọrọ. Enweghị nkwenye gị, anyị agaghị ekpughe nkọwa gị na onye ọ bụla ọzọ. Can nwere ike wepu aha na oge ọ bụla site na ịpị njikọ "wepu aha" na ala nke email ọ bụla, ma ọ bụ site na iziga anyị email na nzuzo@dezeen.com.
Mmetụta nke COVID-19 na corrugated ...
Kpoo 3D akụkụ ndị edepụtara gbasara ...
Jonatan Nilsson na-emepụta iko na-afụ d ...